Lozam-pifamoivoizana tao Ambohimandroso : Sprinter nifaoka kamiao Tata, efatra namoy ny ainy | NewsMada
Lozam-pifamoivoizana tao Ambohimandroso : Sprinter nifaoka kamiao Tata, efatra namoy ny ainy
Par Taratra sur 10/01/2017
Olona roa no maty teo noho eo. Roa hafa kosa namoy ny ainy teny an-dalana ho any amin’ny hopitaly. Io indray no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, vokatry ny fifandonan’ny taksiborosy sprinter iray, nifaoka kamiao Tata, tany Ambohimandroso (RN 7), omaly maraina.
Fiara Sprinter taksiborosy mampitohy an’i Farafangana sy Antananarivo no niharan-doza, omaly vao maraina, tokony ho tamin’ny 4 ora teo, tany Ambohimandroso, lalam-pirenena fahafito. Olona efatra no voalaza fa maty, ka ny roa tamin’ireo maty teo noho eo ary ny roa hafa maty teny an-dalana hamonjy hopitaly. Mpanamboatra fiara tao ambanin’ilay kamiao sy vehivavy iray ireo maty voalohany, voatrongin’ilay Sprinter. Nosokirina mihitsy kosa ny mpamilin’ity farany sy ny olona teo akaikiny vao tafavoaka. Mbola tsy mahatsiaro tena any amin’ny hopitaly izy io hatramin’ny ora nanoratanay, ary mety atahorana ny ainy.
Araka ny fanazavana, nijanona amoron-dalana ilay Tata noho ny olana ara-teknika. Tsy fantatra mazava na hitan’ilay mpamily Sprinter ilay fiara Tata io na tsy hitany. Ny andro mbola maizina rahateo, kanefa ny jiron’ny fiara mirehitra. Voalaza fa nandeha mafy ilay fiara Sprinter io, ary nirefotra avy hatrany teo amin’ilay Tata. Tao anatin’ny fotoana fohy nitrangan’izany rehetra izany.
Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fizahana ity loza ity. Efa nazava mihitsy vao tena hita ny fahavoazan’ireo fiara roa. Tonga tany amin’ny hopitaly ireo maty sy naratra.
Vao ny herinandro ambony teo, ny fiandohan’ny taona ilay loza nahatsiravina tany amin’ny RN7, teo Ilempona izay tsy lavitra ny nitrangan’ity omaly ity. Taksiborosy Sprinter sy kamiao nifandona ka nahafatesana olona valo mianaka. Ny niafaran’ny famotorana tamin’ity loza farany ity, nangingina tanteraka. Ity nitrangan-doza hafa indray.
Efa ho lava ity loza ateraky ny taksiborosy sy ny mpamily ary ny fiara Sprinter. Samy manameloka ny mpamily, ary indrindra ity karazam-piara ity ny rehetra. Ny fanehoan-kevitra anaty fiaraha-monina sy ny tambajotra sosialy tsy ferana intsony. Lasa any amin’ny Sprinter ny rihatra no miangona. “Sprinter indray izay”, hoy ny olona.
Ity karazam-piara ity ve no tsy mety amin’ny lalana eto amintsika sa ny mpamily no tsy mahafehy azy? Tsy misy ny fepetra raisin’ny fanjakana manoloana ity loza mahafaty olona ity no efa ho lava. Raha any amin’ny firenena hafa mety efa noferana ny fampiasana sy ny fampidirana io karazam-piara io. Ny eto amintsika sarotra ny haka izany fepetra izany satria mampidi-bola ho an’ny fitondrana izany, ary mety ny mpitondra aza no manana betsaka amin’izy ireny.